Manome Fahalalahana ho An’ny Vavolombelon’i Jehovah i Kirghizistan
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kikaonde Kinyarwanda Kirundi Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tiorka Tseky Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
5 NOVAMBRA 2014
Andro manan-tantara ho an’ny Vavolombelon’i Jehovah any Kirghizistan ny 4 Septambra 2014. Tamin’io mantsy ny Filan-kevitra Momba ny Lalàm-panorenana ao amin’ny Fitsarana Tampon’i Kirghizistan no nanambara fa tsy mifanaraka amin’ny Lalàm-panonerana ny ampahany amin’ilay Lalàna Momba ny Fivavahana * navoaka tamin’ny 2008. Nilaza ilay fitsarana fa manan-jo hanao ny zavatra fanaony ao amin’ny fivavahany ny Vavolombelon’i Jehovah. Tsy nekena ho ara-dalàna mantsy ireo Vavolombelona any amin’ny faritra atsimon’i Kirghizistan, nandritra ny efa-taona lasa.
Nekena ho ara-dalàna ny Vavolombelon’i Jehovah any Kirghizistan, tamin’ny 1998. Tsy nisy nanakantsakana ny asan’izy ireo tamin’izay. Niova anefa izany nanomboka tamin’ny 2008, rehefa nivoaka ilay Lalàna Momba ny Fivavahana. Nokorontanin’ny polisy foana ny fotoam-pivavahan’ireo Vavolombelona any amin’ny faritra atsimon’i Kirghizistan, taorian’izay. Tsy ara-dalàna, hono, ny fivavahan’izy ireo satria mbola tsy voasoratra ara-dalàna teo an-toerana. Ny sasany tamin’ireo lalàna nivoaka tamin’ny 2008 koa no nampiasain’ny Komity Mikarakara ny Raharaha Ara-pivavahana mba hanakanana ny Vavolombelona tsy ho voasoratra ara-dalàna. Tsy nisy intsony anefa ireny vato misakana ireny rehefa nivoaka ilay didy tamin’ny 4 Septambra.
Niova tanteraka ny toe-draharaha
Nilaza ilay lalàna tamin’ny 2008 (Andininy 8(2)) fa voarara “ny zava-drehetra ataon’ny fikambanana ara-pivavahana”, raha mbola tsy voasoratra ara-dalàna izy io. Nieritreritra àry ny Komity Mikarakara ny Raharaha Ara-pivavahana fa azony ampiasaina io lalàna io, mba handrarana ny asan’ny Vavolombelon’i Jehovah any amin’ireo tanàna maro any Kirghizistan. Mbola tsy voasoratra ara-dalàna any amin’ireo tanàna ireo mantsy ny Vavolombelon’i Jehovah. Notakin’ilay lalàna (Andininy 10(2)) koa hoe tokony homena ny filan-kevitry ny tanàna ny lisitra ara-dalàna misy ny anaran’ny mpikambana 200 ao amin’ny fikambanana ara-pivavahana iray. Rehefa eken’ilay filan-kevitra io lisitra io vao azo atao ny mangataka any amin’ny Komity Mikarakara ny Raharaha Ara-pivavahana mba hanoratana an’ilay fikambanana ho ara-dalàna. Sahirana ny Vavolombelona satria nasain’io komity io nosoratana ara-dalàna isaky ny tanàna misy azy ny fivavahany, nefa tsy neken’ny filan-kevitry ny tanàna ny lisitry ny mpikambana nomeny. Tsy vitan’ny Vavolombelona mihitsy ny nanoratra ara-dalàna ny fikambanan’izy ireo, ka dia nanararaotra nampijaly azy ireo ilay komity sy ireo manam-pahefana. Nampakatra ny raharaha tany amin’ny Filan-kevitra Momba ny Lalàm-panorenana àry ireo Vavolombelona.
Izao no didy navoakan’ny Filan-kevitra Momba ny Lalàm-panorenana: “Mitovy daholo ny fikambanana ara-pivavahana rehetra eo anatrehan’ny lalàna, ary tsy tokony hasiana tombo sy hala.” Voalaza koa fa tsy mifanaraka amin’ny Lalàm-panorenana ilay hoe tokony homena ny filan-kevitry ny tanàna ny lisitry ny mpikambana ao amin’ny fikambanana ara-pivavahana iray (Andininy 10(2) amin’ilay lalàna tamin’ny 2008). Nanatsoaka hevitra ny Fitsarana Tampony fa “diso ny fahazoana” ny Andininy 8(2) amin’ilay lalàna. Nilaza io andininy io fa manana zo hanao ny fanompoany an’Andriamanitra an-kalalahana ny fivavahana rehetra, ka afaka mifidy izay faritra tiany hanaovana an’izany izy ao amin’ny antontan-taratasiny. Efa nazava tao amin’ny antontan-taratasin’ny Vavolombelon’i Jehovah tamin’ny 1998 anefa fa i Kirghizistan iray manontolo no faritra nofidin’izy ireo. Midika izany fa afaka manao ny zavatra fanaony ao amin’ny fivavahany izy ireo eran’i Kirghizistan, ary tsy tokony hisy hanakantsakana.
Nandray soa ireo niharan’ny fanavakavahana
Vaovao tsara ho an’ny Vavolombelon’i Jehovah any amin’ny faritra atsimon’i Kirghizistan ilay didy tamin’ny 4 Septambra. Anisan’ny nandray soa tamin’izany ny vehivavy iray atao hoe Oksana Koriakina sy Nadezhda Sergienko reniny, izay mipetraka ao amin’ny tanànan’i Osh. Nambenana tao amin’ny trano iray izy mianaka nanomboka tamin’ny Martsa 2013, satria voaendrikendrika ho mpisoloky tamin’izy ireo niresaka ny finoany tamin’ny vehivavy zokiolona telo. Nampangaina izy mianaka na dia nazava aza ny porofo hoe tsy diso izy ireo.
Natao tao amin’ny tribonalin’i Osh ny fitsarana azy mianaka, tamin’ny Septambra 2014. Nafahana madiodio izy ireo ny 7 Oktobra 2014. Namoaka didy koa ilay fitsarana fa tokony hahazo onitra izy ireo satria nendrikendrehina sy nogadraina tsy ara-drariny. Niaiky ilay fitsarana fa notsaraina an-tendrony sy navakavahana noho ny fivavahany ireo Vavolombelona roa ireo, satria fotsiny hoe tsy ara-dalàna ny asan’ny Vavolombelon’i Jehovah ao Osh. Tsy voasoratra ara-dalàna eo an-toerana mantsy ny fivavahan’izy ireo. Nampiasain’i Oksana sy Nadezhda mba hiarovan-tena ilay didy navoakan’ny Filan-kevitra Momba ny Lalàm-panorenana tamin’ny 4 Septambra. Araka io didy io, dia ara-dalàna ny asan’ny Vavolombelon’i Jehovah ao Osh sy manerana an’i Kirghizistan.
Oksana Koriakina sy Nadezhda Sergienko
Ezaka atao mba hanajana ny zon’olombelona eran-tany
Neken’i Kirghizistan ny Fifanarahan’ny Firenena Mikambana Momba ny Zo Sivily sy Politika. Nanaiky izy hoe hanaja ny zon’olombelona sy hanome fahalalahana ho an’ny vahoakany. Tafiditra amin’izany ny fahalalahana ara-pivavahana sy ny fahalalahana hivory ary haneho hevitra. Hita hoe tena nanohana ny fahalalahana sy ny zon’olombelona ny Filan-kevitra Momba ny Lalàm-panorenana ao amin’ny Fitsarana Tampon’i Kirghizistan rehefa namoaka didy manohana ny fahalalahana ara-pivavahana. Faly ireo Vavolombelon’i Jehovah miisa 5 000 latsaka, any Kirghizistan satria nahazo fahalalahana. Tena nankasitrahan’izy ireo koa ny rafitra napetraka mba hiarovana sy hanohanana ny fahalalahana ho an’ny rehetra.
^ feh. 2 Izao no anaran’ilay lalàna: “Lalàn’ny Repoblikan’i Kirghizistan Momba ny Fahalalahana Ara-pivavahana sy ny Fikambanana Ara-pivavahana.”
Hisy Amin’izay ve ny Fahalalahana Ara-pivavahana any Kirghizistan?